सरकार, बिहीबार विदा नदिने? – MySansar
सरकार, बिहीबार विदा नदिने?
Posted on November 1, 2016 November 1, 2016 by Salokya
भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल भ्रमणमा आउने दिन बुधबार सरकारले सार्वजनिक विदा घोषणा गर्‍यो। स्वागत गर्न देशभर किन विदा दिनुपर्ने? काठमाडौँमा ट्राफिक जाम हुने भए देशभर किन विदा दिनुपर्ने? जस्ता सही तर्क गर्नेदेखि हाजिर गरेर टाप ठोक्न भ्याउने, काम भनेको गर्नै नपरे हुन्थ्यो जस्तो गर्ने कर्मचारीहरुले समेत विदाको विरोध गर्न भ्याए। तर जस्तै विरोध भए पनि सरकारले विदाको निर्णय फिर्ता लिएन। ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्ता तर्क दिएरै सरकारले विदाको निर्णय उचित भन्दै गर्‍यो। ट्राफिक जाम नहुने ठाउँमा चाहिँ किन विदा दिनु पर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर भने दिन सकेन। अझ अमेरिकादेखि चीनसम्मका कुटनीतिक नियोगमा समेत विदा किन दिनुपर्ने त्यसको उत्तर पनि दिन सकेन। ट्राफिक जामको तर्क सवारीका कारण हुने सडक बन्दको सूची हेर्दा पनि सही देखिएन। मुखर्जी आउने दिन बुधबार भन्दा त्यसको भोलिपल्ट बिहीबार बढी सडक बन्द हुने स्थिति रहेछ। भित्र हेर्नुस् सूची-
कात्तिक १७ गते, बुधबार (यो दिन सार्वजनिक विदा घोषणा गरिएको छ। बिहान साढे ११ बजेदेखि बेलुकी साढे ८ बजेसम्म काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा सडकमा अवरोध हुनेछ)
कात्तिक १८ गते, बिहीबार (यो दिन विदा छैन,यो दिन त झन् बिहान ९ बजेदेखि नै राति १० बजेसम्म विभिन्न सडक अवरुद्ध हुनेछन्)
बुधबार र बिहीबारको तुलना गर्ने हो भने बिहीबार नै धेरै ठाउँमा सडक अवरुद्ध हुने देखिन्छ। त्यसैले सर्वसाधारणले दुःख नपाउन् भनेर विदा दिएको तर्क ठीक हो भने बुधबारभन्दा बढी हैरानी हुने दिन बिहीबार विदा दिनु पर्ने हो। सरकार, बिहीबार विदा नदिने त?
विदा दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकै बस्नुपर्ने त हैन, गृह मन्त्रालयले विदाको घोषणा गरिदिए हुने हो। प्रचण्ड सरकारलाई चाहिँ के के न जस्तो लागेर क्याबिनेटै बसेर विदा घोषणा गर्नुपरेको। त्यहाँमाथि चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा पनि विदाको घोषणा अहिले नै गरिदिइहालेको।
बिहीबार विदा नभएको दिन जाममा परेर दुःख पाएपछि शायद काठमाडौँका सडकमा हिँड्नेले यसो भनेर सराप्लान् प्रचण्डलाई- आज पनि विदा दिनुपर्दैन थियो?